Ny politika dia politika | NewsMada
Ny politika dia politika
Fahaizana mandainga ny politika sa fahaizana politika ny mandainga? Mihalalina hatrany ny lainga amin’izao toe-draharaham-pirenena izao. Mby amin’ny hoe raha vao mandainga indray mandeha amina raharaha iray ny olona na vondron’olona iray, voatery mandainga hatramin’ny farany hanohanana na hanafenana izay lainga izay? Na raha vao mandainga any am-boalohany, mandainga ho azy hatramin’ny farany…
Izany ny zava-misy sy iainana amin’izao? Ny politika dia politika na inona fanamarinan-tena amin’izay lazaina sy atao: eo mandrakariva ny kajikajy sy ny paipaika. Tonga amin’izay hoe lainga izay ny sasany: tsy azo inoana na ekena fa noforonina ranofotsiny. Hionganam-potsiny amin’izao, hono, rey olona, ny fitondrana fa tsy aongana. Araka izany ve izay atao amin’izao, tsy fanozongozonana sy fanonganana fanjakana?
Toy izany koa ny hoe tsy mila na mitady izay fiaraha-mitantana fa ny governemanta hoe matanjaka sy ekena rehetra no ilaina. Raha hatao tokoa izany, hipetra-potsiny amin’izao ireo manao angoa-tenda fa tsy mila izay fiaraha-mitantana raha tsy tafiditra? Ny politika dia politika: ady ahazoana fahefam-panjakana na fitondrana hatrany, arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa arovana na iadiana fa tsy inona.
Mbola izay koa ny hoe tsy miandry izay fifidianana amin’ny taona 2023 fa tsy mandeha amin’izay izy ny fifidianana farany teo. Mila ovaina ny lalàna mifehy ny fifidianana? Na ny rafitra misahana ny fikarakarana… Nefa nekena sy nirosoana ny tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika sy fifidianana solombavambahoaka. Tsy mety indray rehefa tsy voafidy ny tena na tsy nahazo olom-boafidy maro?
Izay mety amin’ny tena ihany no tsara sy marina? Na mahasoa sy tokony hatao… Arakaraka ny fifandanjan-kery sy ny tombontsoa arovana na iadiana ny politika. Iza na inona loatra ny mahatonga ny fiheveran-tena ho mafy sy mahery? Anjaran’ny eo amin’ny fitondrana ny manaporofo ny fahaiza-manao amin’ny fitantanana sy ny fampiasana fahefam-panjakana fa tsy marina sy tsy mitombina izay lazaina etsy sy eroa.